မနက်စာ... အာဟာရ (၁) – Pann Satt Lann Books
မိမိအတွေးနဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကို အားအင်ပြည့်လတ်ဆတ်နေပြီး နေ့တစ်နေ့တာချင်းစီကို အကောင်းမွန်ဆုံး နိုးထဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ စိတ်ခွန်အားပေးမယ့် စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အာဟာရလိုအပ်သလို … စိတ်ဝိညာဉ် ရှင်းသန့်ကြည့်လင်ဖို့၊ အတွေးအခေါ် အင်အားကောင်းဖို့ မိမိရဲ့ စိတ်နှလုံး ဦးနှောက်မှာ အာဟာရလိုပါတယ်။
ဆရာမရဲ့ စာချစ်သူတွေ မနက်ခင်း နိုးထလာတဲ့အခါတိုင်း.. စိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းစွာ..
ဖတ်​ကြရတဲ့..Morning Vitamins ဆိုတဲ့ မနက်စာ အာဟာရ စာစုများကို ပထမဆုံး နံပါတ်တစ် စာအုပ်အနေနဲ့ ထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2021 ဖေဖော်ဝါရီလ (ဒု-ကြိမ်)
မနက်စာ… အာဟာရ (၁) အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု 13 ရှိပါသည်။
Zin Mee Mee Htun (@Readbychal) – January 28, 2021
ဆရာမ မွန်ဟော်စီရဲ့ (၁၀) အုပ်မြောက်စာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့ “မနက်စာအာဟာရ” တဲ့ ?
ဆရာမ မွန်ဟော်စီကို စသိခဲ့ရတာက အမေစုအကြောင်းရေးထားတဲ့ “ပေးဆပ်သူရဲ့ နှလုံးသား
ဝိဉာဉ်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးနဲ့ပါ။ အဲဒီတုန်းကလည်း မျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်တော့ ဆရာမ Page က တင်ပေးတဲ့ စာသားလေးတွေ၊ စာစုလေးတွေကိုလည်း လိုက်ဖတ်မိပါတယ်။
အခုလည်း မနက်စာ….အာဟာရ (၁) Morning Vitamins (1) ……………….☀️☀️
ချယ်ကြားဖူးတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကိုထမင်းသုံးနပ် စားကြရတဲ့အခါ မနက်ခင်းစာက အဲဒီ တစ်နေ့စာလုံးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးပါတဲ့။
ဒီလိုပါပဲ။ လူတစ်ယောက်အတွက် မနက်စာကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြည့်ပြည့်ဝဝစားရသလို မနက်ခင်းအိပ်ရာမှထပြီးခါစ မနက်ခင်းအတွေးအာရုံကောင်း သည်လည်း တစ်နေ့လုံးစာအတွက် အရေးအကြီးဆုံးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွေးဟာတစ်မနက်ခင်းမှစ တစ်နေ့လုံးအတွက် ခွန်အားသတ္တိလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် မနက်စာအာဟာရတွေစားပေးရသလို စိတ် ၊ နှလုံးသားအတွက်လည်း မနက်စာ အာဟာရလေးတွေ ကျွေးရပါမယ်။ ဒီစာအုပ်လေးမှာ ဆရာမက စိတ်အာဟာရထမင်းပွဲ (၃၀) ပြင်ပေး ထားပါတယ်။
မနက်ခင်းအိပ်ရာက ထလိုက်သည်နှင့် စိတ်က သူ့အလိုလို အလိုမကျဖြစ်နေသည့် နေ့ရက်များ၊ ကသီ လင်တဖြစ်ရသည့် မနက်ခင်းများ၊ ထိုမှစ တနေကုန် Timing မကိုက်ပဲ အဆင်မပြေဖြစ်ရသည်များ လူတိုင်းလိုလို ကြုံရတတ်သည်။ ထိုအချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ တစ်ပွဲ…………?
ချယ်တို့တတွေဟာ ဒီလောကကြီးမှာ ဖြတ်သန်းနေကြရတဲ့အခါ တနေ့တနေ့ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်မိ နေလဲ၊ နောက်နေ့ ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ၊ အခု လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာ ဘယ်လိုတွေ အကောင်းဆုံး လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာ အသေအချာ တွေးကြည့်ဖို့ တစ်ပွဲ……………?
ဘဝမှာ နေရတဲ့အချိန်က အကြာကြီးမရပါဘူး။ အဲဒီကာလ တိုတိုလေးမှာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်စေ မယ့်အတွေးတွေ ၊ အရာတွေကိုသာ သယ်ဆောင်ပြီး မလိုအပ်တဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ၊ စိတ်အညစ် အကြေးတွေကို ချထားခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ နေရတဲ့အချိန်တွေက တန်ဖိုးရှိမှာပါလို့ ပြောထားတာက တစ်ပွဲ ……………?
“အရိုးသားဆုံး စကားလုံးတွေ၊ အမူအရာတွေနဲ့……. လူတွေရဲ့……….နှလုံးသားကို လှစ်ဟပြတဲ့အခါ တိုင်း…အလှဆုံး……၊ ချစ်စရာအကောင်းဆုံး……အရာတွေကို တွေ့မြင်ရတတ်တာ သဘာဝပါပဲ……..။” ဆိုတာလေးကတစ်မျိုး………..?
မေတ္တာနဲ့သာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ “Only Love Can Save the World ၊ မေတ္တာ တရားကသာ……ကမ္ဘာမြေကို ကယ်တင်သွားလိမ့်မယ်” ဆိုတာလေးက တစ်ပွဲ…………..?
ချယ်အကြိုက်ဆုံးလေးကတော့ “အချိုပွဲလေး…..အရင်စားပါ” ဆိုတာလေးပါ။ “Eat the dessert first” တဲ့။ တစ်ခါတရံ ကိုယ်က သိပ်အရေးကြီးဘူးထင်ထားတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခု၊ အချိန်တစ်ချိန်ချိန်ဟာ နောင် တစ်ချိန်မှာ ချယ့်တို့ဘဝအတွက် အဲဒီကိစ္စ၊ အဲဒီအချိန်လေးတွေက တကယ့်ကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စရာ ဖြစ်နေတတ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြထားတာလေးပါ………….?
ချယ် အခုပြောသွားတာတွေက စာအုပ်လေးထဲက အကြောင်းအရာလေးတွေထဲကမှ သိချင်စိတ်ပိုဖြစ်လာအောင် စာမြည်းလေးတွေပဲ ပြောပြပေးသွားတာပါနော် ။မပြည့်စုံပါဘူး။ အပေါ်က အကြောင်းအရာလေးတွေအားလုံးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မြည်းစမ်းကြည့်ချင်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒီစာအုပ်လေးကို သေချာပေါက် ဖတ်ကြည့်ကြပါလို့ ပြောလိုက်၊ ညွှန်းလိုက်ပါရစေရှင်…………..?
#Readbychal #bookworms #မွန်ဟော်စီ #မနက်စာအာဟာရ၁ #MorningVitamin1 #စာစုကောင်းလေးများ #စာဖတ်ကြရအောင်
Aung May Min – January 28, 2021
မနက်စာ အဟာရ ဖတ်ပြီး
Mi Shweyee Win Htet – July 30, 2021
ဆရာမ မွန်ဟော်စီရဲ့ မနက်စာအာဟာရ(၁)
ဘဝမှာ ထိန်းချုပ်ရခက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးရမလဲ။
စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အချိန်ကို ဖယ်ပြီး ဘဝမှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနေထိုင်တတ်ဖို့ ရှင်သန်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေ၊ စိတ်အေးချမ်းမှု စိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရရှိစေတဲ့ အရာတွေကို ဆရာမက ဝေမျှပေးထားပါတယ်။
သဘာဝအလှတရားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနေထိုင် မယ်ဆိုရင် မထင်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်တွေဟာ တိုးတက်လာသလို နေ့ရက်တိုင်းမှာရှင်သန်ခြင်းကို လှပစွာနဲ့ တည်ဆောက်ချင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘဝမှာဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်စရာတွေများစွာရှိနေပါစေ၊ အခက်အခဲများစွာရှိနေပါစေ ၊ စိတ်အလိုမကျတာတွေ ၊ ရှင်သန်ဖို့ကိုတောင် စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီး ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်တတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဆရာမက တိုတိုနဲ့ ရှင်းပြပေးထားတဲ့ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါ။
စိတ်တွေကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားတာထက်စာရင် သူ့ကို ရေလောင်းပေးဖို့